Iindaba - Yintoni ibhokisi yezonyango yeplastiki
Ibhokisi yeplastiki yonyango (ekwabizwa ngokuba yibhokisi yamayeza) okanye iibhokisi zeplastiki zonyango, zisetyenziswa kakhulu kwizibhedlele nakwiintsapho. Ingasetyenziselwa ukugcina iziyobisi, izixhobo zonyango okanye ukuziphatha xa ubona izigulana.
Ibhokisi yezonyango, njengoko igama layo lisitsho, sisiqulatho sokugcina amayeza kunye nezixhobo zonyango, ezinokuthi zikhutshwe zisetyenziswe kwimeko ethile. Xa kuthelekiswa nekhithi yonyango, ibhokisi yonyango inomthamo omkhulu kunye nomthamo omkhulu, onokuthi ugcine izinto ezininzi. Iikiti zonyango zinokugcina kuphela izinto ezingxamisekileyo ukuze zisetyenziswe ngexesha elinye. Iibhokisi zonyango zihlukile kuba zigcina izinto ezininzi ngenxa yobukhulu bazo obukhulu.
Ucalulo lweebhokisi zeplastiki zonyango
1.Ibhokisi yoNyango loSapho
2. Oogqirha baphatha iikiti zabo zonyango
3. Ikhithi yoncedo lokuqala
4.Iibhokisi zokugcina iziyobisi ezibhedlele
Ibhokisi ibhokisi 5.Intelligent
Ibhokisi ibhokisi 6.Desktop
7.Comprehensive isebenzisa ibhokisi yonyango
8.Ibhokisi yezonyango ezenzekelayo
Ulwahlulo ngesitayile nolwakhiwo
Ibhokisi 1.Simple zonyango
Ibhokisi yonyango ye-2
Ibhokisi yonyango 3.Multidrawer
4.Ibhokisi yamayeza yokuqinisa
5.Ibhokisi yokugcina amayeza amakhulu
Ibhokisi yonyango yosapho Uncedo lokuqala
Oogqirha baphatha izixhobo zonyango
Ibhokisi yezonyango yeMultidrawer kunye neMultichamber
Ibhokisi yezonyango elula
Ibhokisi yamayeza akrelekrele ibhokisi yezonyango esebenzayo
Ibhokisi yezonyango yedesktop
Isebenzisa ngokugqibeleleyo ibhokisi yezonyango
Iibhokisi zokugcina iziyobisi ezibhedlele
Zeziphi izinto zeplastiki ezisetyenziselwa ukwenza iinxalenye zebhokisi yezonyango?
Kwizibhedlele, isebe okanye uhlobo oluthile lwezixhobo zonyango kunye nezixhobo zihlala zidityaniswa kwiphakheji enye okanye ezininzi ezizodwa.
Olu hlobo lweseti yamayeza lugqityiwe lwaza lwahlelwa. Ibizwa ngokuba yibhokisi yezonyango.
Ngaphandle kwebhokisi yezonyango esetyenziswe kwibala lemfazwe okanye ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu kwimeko ekhethekileyo, uninzi lweebhokisi zonyango zenziwe ngeplastikhi yokubumba. Umzekelo: ibhokisi yamayeza esibhedlele, ibhokisi yamayeza asekhaya, ibhokisi yeyeza yoncedo lokuqala njalo njalo.
Izinto zeplastiki esizisebenzisayo ukwenza ibhokisi yezonyango zii-PP, ABS, PC.
Iimpawu zebhokisi yezonyango ze-PP: umthamo omkhulu, ubunzima bokukhanya, ixabiso eliphantsi lemveliso, linokukwazi ukugcina iziyobisi ezahlukeneyo, ubungqina bomswakama, anti-umnqamlezo-incasa. Kukulungele ukugcinwa kweziyobisi emakhaya nasezibhedlele.
Ngokwesidingo sokusetyenziswa, ezinye izinto zeplastiki okanye zentsimbi zisetyenziselwa ukutshatisa kunye neendawo zebhokisi ye-PP ukomeleza okanye ukunika imisebenzi emininzi ebhokisini.
Ngokwabasebenzisi, imeko-bume kunye nokugcinwa kweziyobisi okanye izixhobo zonyango, ibhokisi yeyeza ineendlela ezahlukeneyo, ubukhulu kunye nolwakhiwo lwangaphakathi.
Zeziphi izinto zePlastikhi ezikwibhokisi yamayeza?
Ibhokisi yamayeza ikakhulu enamalungu eplastiki ikakhulu ibandakanya ezi ndawo zilandelayo zeplastiki
3. Itreyi yangaphakathi, iibhokisi zeedrowa
Inaliti Ithekhnoloji yokubumba kunye neengcebiso zezinto zebhokisi yeplastiki
1. Ngokubanzi, ubungakanani bebhokisi yamayeza elula incinci, kwaye nobume bayo bulula. Isiciko esiphezulu, ibhokisi yebhokisi kunye neendawo zangaphakathi zingenziwa ngokubanzi ngeplastiki ye-PP.
2. Kwindawo zangaphandle zebhokisi yamayeza emisebenzi emininzi enesakhiwo esimbaxa, iABS kunye nezinto zePC ezinobungakanani obuzinzileyo zihlala zisetyenziswa.
3. Amalungu eentsimbi zealuminium maxa wambi ayongezwa ukomeleza imiphetho kunye neekona zeebhokisi zamayeza ezihlala zifuna ukususwa.
4.Ubunzulu bebhokisi yamayeza bukhulu kakhulu, kwaye akukho kuqiniswa ngokwaneleyo ngaphakathi kwebhokisi. Izinto zeABS okanye zePC ziyafuneka.
5. Izinto ezisetyenzisiweyo kufuneka zanelise i-ROHS okanye i-FDA. Ukugcinwa kunye nokusetyenziswa kwezinto kufuneka kwahlulwe kwezinye izinto.
6. Oomatshini bokufaka inaliti kunye nendawo yemveliso kufuneka zicoceke kwaye zicoceke ukufezekisa imigangatho.
Ikhithi yonyango ineemarike ezibanzi, imveliso yayo kufuneka ihambelane nemigangatho ethile yoshishino. Inkampani yeMestech yenza ukungunda kweplastiki kunye nemveliso yebhokisi yezonyango yesiko.Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.